ကြှနျ​တျောမ​သေ​​သေးဘူး ကြှနျ​တျော့ကိုယျ​တှပေ့ါ – KK Daily News
မ​နကေ့ မနကျ၆နာရီမှာအိပျယာနိုး​တော့ ကိုယျလကျနဲနဲနာသလိုနဲ့အနံ့​ပြောကျသလိုခံစားရတယျ…Breakfastစား​တော့လဲ အနံ့မရ​တော့ အနံ့​ပြောကျ​နပေီးဆိုတာသိရတယျ…​မေ​မဆေီဖုနျးဆကျ​ပွောပွတယျ ဒီမနကျအနံ့​ပြောကျ​နတေယျ..ဘာအနံ့မှမရဘူး…ပီး​တော့ ကြှနျ​တျော အကိုကျခဲ​ပြောကျ​ဆေးတဈလုံး​သောကျတယျ…၁၀နာရီခှဲလောကျ ကြှနျ​တျော အသကျရှူကွပျလာတယျ။
ကြှနျ​တျော့အ​မနေဲ့ကြှနျ​တျော့အသိမိတျ​​ဆှေ မအိအိဆီ ဖုနျးဆကျပီး​​ပွောပွတယျ…အသကျရှူကွပျတဲ့အခြိနျမှာ ​ဇော​​ခြှေး​တှပွေနျလာတယျ…​မောလာတယျ…လကျဖြား​တှေ​အေးစကျလာတယျ…အသား​​​တှဖွေူ​​ဖြော့လာတယျ..အရကျအရမျးမူးသလို ခြာခြာလညျ​နတေယျ…သတိလဈခငျြသလိုဖွဈလာတယျ…​တျော​တျော​လေးလဲ​​ကွောကျ​နမေိတယျ…​သေ​တော့မယျဆိုတဲ့အသိဝငျလာတယျ။
ခကျြခငျြးဘဲ ကွကျသှနျနီတဈလုံးကို ပါးစပျထဲထညျ့ပီးဝါး​တော့တာဘဲ…ကွကျသှနျနီဝါးပီး အရညျမြိုခတြဲ့ စက်ကနျ့ပိုငျး အခြိနျမှာ လညျ​ခြောငျးတဈခုလုံး ပူလာတယျ…​ဇတျ​ကွော​နရောက​နေ ငယျထိပျထိ ပူတကျလာပီးတာနဲ့ နှာ​ခေါငျးထဲက​နေ အရညျ​တှေ အမြားကွီးစီးလာ​တော့မှ ကြှနျ​တျောအသကျရှူလို့ရသှားတယျ ….ဒီ​နလေဲ့အနံ့​ပြောကျ​နေ​ပမေဲ့အသကျရှူကွပျတာမရှိ​တော့လို့ အသကျရှငျ​နဆေဲဖွဈပါတယျ။
(​အသကျရှူကွပျလာပွီးခွလေကျခွတှေေ မလှုပျခငျြသလို အားလုံးဝမရှိသလိုဖွဈလာပွီဆိုရငျ သသှေားနိုငျတဲ့အခွအေနကေို ရောကျနပွေီ။ စကားပွောရငျမောပွီး အားယူပွောရတဲ့အခွအေနနေဲ့ ခွလေကျလှုပျဘို့အားစိုကျရတဲ့အသကျရူဘို့နရောလပျမကနျြ ဖွဈနတေဲ့အခွအေနရေောကျရနျ အခြိနျ၂နာရီဝနျးကငျြခနျ့သာကွာပါတယျစိတျမပူပါနဲ့ မီးဖိုခြောငျထဲကိုရောကျအောငျသှားနိုငျရငျ မသတေော့ဘူးအဲဒီ အခြိနျမှာ အားတငျးပွီ လရေအောငျရှူဘို့လိုတယျ။
မီးဖိုခြောငျထဲရောကျလို့ ကွကျသှနျနီဥတလုံးဝါးပွီးထှကျလာတဲ့အခိုးကို အဆုတျထဲစုတျသှငျးပွီးအောငျ့ထားပွနျထုတျလုပျပွီးတာနဲ့ အသကျရှူလမျး​ကွောငျးပှငျ့ပီး အသကျရှူလို့ရပါပီးမသနေိုငျတော့ပါဘူး….)
မ​နေ့က မနက်၆နာရီမှာအိပ်ယာနိုး​တော့ ကိုယ်လက်နဲနဲနာသလိုနဲ့အနံ့​ပျောက်သလိုခံစားရတယ်…Breakfastစား​တော့လဲ အနံ့မရ​တော့ အနံ့​ပျောက်​နေပီးဆိုတာသိရတယ်…​မေ​မေဆီဖုန်းဆက်​ပြောပြတယ် ဒီမနက်အနံ့​ပျောက်​နေတယ်..ဘာအနံ့မှမရဘူး…ပီး​တော့ ကျွန်​တော် အကိုက်ခဲ​ပျောက်​ဆေးတစ်လုံး​သောက်တယ်…၁၀နာရီခွဲလောက် ကျွန်​တော် အသက်ရှူကြပ်လာတယ်။
ကျွန်​တော့်အ​မေနဲ့ကျွန်​တော့်အသိမိတ်​​ဆွေ မအိအိဆီ ဖုန်းဆက်ပီး​​ပြောပြတယ်…အသက်ရှူကြပ်တဲ့အချိန်မှာ ​ဇော​​ချွေး​တွေပြန်လာတယ်…​မောလာတယ်…လက်ဖျား​တွေ​အေးစက်လာတယ်…အသား​​​တွေဖြူ​​ဖျော့လာတယ်..အရက်အရမ်းမူးသလို ချာချာလည်​နေတယ်…သတိလစ်ချင်သလိုဖြစ်လာတယ်…​တော်​တော်​လေးလဲ​​ကြောက်​နေမိတယ်…​သေ​တော့မယ်ဆိုတဲ့အသိဝင်လာတယ်။
ချက်ချင်းဘဲ ကြက်သွန်နီတစ်လုံးကို ပါးစပ်ထဲထည့်ပီးဝါး​တော့တာဘဲ…ကြက်သွန်နီဝါးပီး အရည်မျိုချတဲ့ စက္ကန့်ပိုင်း အချိန်မှာ လည်​ချောင်းတစ်ခုလုံး ပူလာတယ်…​ဇတ်​ကြော​နေရာက​နေ ငယ်ထိပ်ထိ ပူတက်လာပီးတာနဲ့ နှာ​ခေါင်းထဲက​နေ အရည်​တွေ အများကြီးစီးလာ​တော့မှ ကျွန်​တော်အသက်ရှူလို့ရသွားတယ် ….ဒီ​နေ့လဲအနံ့​ပျောက်​နေ​ပေမဲ့အသက်ရှူကြပ်တာမရှိ​တော့လို့ အသက်ရှင်​နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
(​အသက်ရှူကြပ်လာပြီးခြေလက်ခြေတွေ မလှုပ်ချင်သလို အားလုံးဝမရှိသလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင် သေသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေကို ရောက်နေပြီ။ စကားပြောရင်မောပြီး အားယူပြောရတဲ့အခြေအနေနဲ့ ခြေလက်လှုပ်ဘို့အားစိုက်ရတဲ့အသက်ရူဘို့နေရာလပ်မကျန် ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရန် အချိန်၂နာရီဝန်းကျင်ခန့်သာကြာပါတယ်စိတ်မပူပါနဲ့ မီးဖိုချောင်ထဲကိုရောက်အောင်သွားနိုင်ရင် မသေတော့ဘူးအဲဒီ အချိန်မှာ အားတင်းပြီ လေရအောင်ရှူဘို့လိုတယ်။
မီးဖိုချောင်ထဲရောက်လို့ ကြက်သွန်နီဥတလုံးဝါးပြီးထွက်လာတဲ့အခိုးကို အဆုတ်ထဲစုတ်သွင်းပြီးအောင့်ထားပြန်ထုတ်လုပ်ပြီးတာနဲ့ အသက်ရှူလမ်း​ကြောင်းပွင့်ပီး အသက်ရှူလို့ရပါပီးမသေနိုင်တော့ပါဘူး….)
အလုပျသမား ( ၃၀ ) ကြျောလုံးကို တဈယောကျ ဆယျသိနျး စီပေးဝခေဲ့တဲ့ အလုပျရှငျတဲ့